Ònye bụ Martin Vrijland? : Martin Vrijland
Ọnye na-bụ Martin Vrijland na gịnị mere o ji ede edemede? Martin Vrijland bụ onye odeakụkọ, onye edemede na onye nyocha nke nwere nnukwu weebụsaịtị na Netherlands ugbu a maka onye na-achọ eziokwu n'ezie. Na 2012, ọ kwụsịrị ọrụ ya dị ka ndị na-ahụ maka ire ahịa mba ụwa wee kpebie ime ụda dị iche. Laa azụ mgbe ị nwechara usoro mgbasa ozi na ihe ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ọzọ. Nke ahụ ka dị obere. Ebe nrụọrụ weebụ ya etolitewo bụrụ otu n'ime ndị kasị ibu na Netherlands nwere ụda siri ike.
N'ọtụtụ ederede m na-ekwu maka ihe nwere ike ọ gaghị ada ụda dị mma ozugbo, mana ọ dị mkpa ilele ya. Anyị na-eche na naanị usoro mgbasa ozi bụ nke dị na akpa nke usoro ahụ guzobere, mana ọ nwere ike ịbụ na akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ dịkwa na akpa nke otu klọb ahụ? Ọ nwere ike ịbụ na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na Netherlands na-achịkwa nke ọma?
Echere m n'ụzọ nkịtị 'ọrụ nzuzo na-achịkwa ya'. Na Netherlands, a na-akpọ klọb ahụ AIVD. Iji gosipụta nke a, ị ga-etinyerịrị ọnụ. Emere m nke ahụ na-enweghị atụmatụ. Enweela ọtụtụ ihe mere, n'ihi ihe mgbasa ozi ndị ọzọ ewepụrụ m n'ụzọ pụrụ iche. Yabụ ihe m ga - eme bụ ịkọwa akụkọ banyere ịrị elu m dị ka onye edemede na ịkọwapụta contours nke ị nwere ike ịgụ n'onwe gị ma ị kwenyere n'echiche m ma ọ bụ na ị kweghị.
Mgbe m bidoro ide akwụkwọ n’afọ 2012, abụghị ebum n’obi m ime nke ahụ ruo mgbe ebighi ebi. Onye ọrụ m nke ikpeazụ bụ ebe m na-arụ ọrụ dị ka onye njikwa azụmaahịa nke mba ụwa furu ọhịa ma n'oge ọrụ m rụrụ ọrụ mgbe nke ahụ gasịrị, na mberede, ejizi 'akwa a na-agbazi agbazi na akwa mgbazinye. Ekpebiri m ide ihe nwa oge (echere m 'nwa oge') wee họrọ pseudonym ka ọ ghara imebi CV m. N'ihi ya, ahapụrụ m ka a chụọ m n'ọrụ na ezigbo mmekọrịta, nke pụtara na m ruru eru inweta uru. Ederede ahụ malitere site na edemede na weebụsaịtị (Arọọ ugbu a) nke Argusoog nke Arend Zeevat wee kwụsị na weebụsaịtị nke m.
Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, a na-eleta weebụsaịtị m ugboro 150 kwa ụbọchị n'oge ikpe Anass Aouragh. Nke a bụ n'ihi na ekpebiri m iji igwefoto gaa na 'mpụ ọnọdụ', n'ihi na Peter R. de Vries kwuru na TV na ntutu niile na eriri ọ bụla a ga-enyocha ya n'okwu a. M na-achọsi ike ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ n'ezie ikpe ma soro otu igwefoto amateur gaa ebe ahụ. N'ebe ahụ, achọtara m ọtụtụ nsị ebe a ga-achọta Anass na ndị gbara àmà na ha ahapụla nkịta ha n'ebe ahụ n'otu ụtụtụ ahụ. Ikpe ahụ weere na Netherlands dum ma m bipụtara akụkọ NFI nke ndị ọzọ. Nke ahụ buru ibu na akụkọ ahụ, n'ihi na ọ dịghị onye ọ bụla gara n'ihu, ma aha m ekwughị (nke ga-enye ọbụna ndị ọbịa ọzọ na saịtị m).
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo m weere ahịa ahụ, a na-agba m mgba okpuru na nkwutọ dị iche iche ma na-agbanyeghị nkwupụta zuru oke na nkwupụta zuru oke, ọ dịghị ihe e mere banyere ya ruo taa. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dịghị onye ọka iwu ọ bụla na-anwa ire ọkụ mgbe ọ bụla m kọwaara ya na enwere ike igosi na mkpọsa a sitere n'akụkụ gọọmentị. Enweghị m azịza ọ bụla site n'aka ọkàiwu na-enupụ isi bụ Sven Hulleman.
Usoro mgbasa ozi ndị ọzọ na-akpasu m oge ahụ na saịtị na ndị mmadụ m nụtụrụla tupu m amalite dị ka onye edemede. Micha Kat bụ otu n'ime ha. Akpọkwara m oku na nnọkọ mkparịta ụka Frontier ma bụrụkwa onye a họpụtara maka inye onyinye 'Frontier'
Mgbe ahụ achọpụtara m ihe mbụ. Iji maa atụ, a ga-agba m ajụjụ ọnụ site na John Nye, ma na mberede na enweghi ike ịga n'ihu. Emere ngosi m, ma ọ bụghị agbasa ozi n'ebe ọ bụla. Marcel Messing (aha a ma ama na mgbasa ozi ọzọ) kpọgara m n'ime ụlọ mgbe ihe ngosi mmechi nke ụfọdụ ndị na-aṅụ ọgwụ. N'ebe a, ọ gwara m na nzuzo na aghaghị m ịkpachara anya. "Ha" nwere ike ịmegide m nanị site na ngwá agha agha.
Ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị na - emegide mgbasa ozi ọzọ na - emegide ọtụtụ saịtị ndị yiri ka ha si na ala pụta, karịsịa maka nkwutọ na nkwutọ na adreesị m. Achọpụtara m na ọ bụ onye na-arụ ọrụ ala (na onye ụkọchukwu OTO) Jeroen Hoogeweij , onye n'oge ahụ biri na nkuku site na Micha Kat.
Ka o sina dị, Micha Kat nabatara m. Ruo oge ahụ, Kat bụ nnukwu aha na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọzọ, n'ihi na ọ nọ na-alụ ọgụ megide pedophilia nke nwoke kachasị elu nke ikpe ziri ezi: Joris Demmink ruo ọtụtụ afọ. Kat kpọrọ m oku ịbịa na usoro Demmink nke ntọala De Roestige Spijker wee kwụọ ụgwọ maka mmanụ m. N'oge a niile, Kat yiri ka ọ nwere ike ịtụfu ego dịka ọ bụghị ihe ọ bụla, nke ahụ wee jide anya. N'oge ngere m chọpụtara na ndị otu nke gbara Demmink akwụkwọ na-egbu oge ma na-echegbu onwe m. Nke ahụ masịrị m. Gịnị mere ha jiri kpasuo m iwe? Ọ bụ na mụ anọghị n'ogige ha?
Mgbe m chọpụtara rịbọn oroma dị n’apata nke onye otu ahụ, a na m eche otu onye otu ndị otu mgbakwasị ụkwụ ma ọ bụ nke na-erughị steeti Dutch nwere ike iyi akwa oroma oroma. N'ihi ya, amalitere m igwu ala n'etiti ndị mmadụ na ntọala ahụ. Dịka ọmụmaatụ, achọtara m eziokwu na eriri ọkpọ a (nke a na-akpọ Ben Ottens) enyerela aka ịkwalite uru dị na Schiphol site na njem ugbo iji wuo ala.
Ezinaụlọ Poot, onye kwụrụ ụgwọ maka ntọala a, Roestige Spijker, nwetara ikike ijeri ijeri steeti Dutch maka ala ndị ahụ (gụnyere ọrụ mmepe mmepe. Achọpụtara m na ntọala ahụ jikọrọ aka na ya Jack Abramoff, nwoke nke weghaara 'elu-ogo' na US na mmekorita mmekorita. Ya mere enwere m na mberede ma na mberede chọpụtara na ezinụlọ Poot kwadoro Kat na nke a niile bụ na ọ bụ nnukwu aghụghọ. Ya mere, ikpe ahụ megide Demmink adabereghị na elucidation nke imebi iwu, ma o doro anya na ọtụtụ ihe gbasara ịpụnara ndị Dutch.
All weebụsaịtị na ọzọ media, Otú ọ dị, pụtara n'oge abuses gburugburu ha (siburu) dike Micha Kaiser, na-achọghị ka na-eche ihu. Ọbụna a kpọrọ m ka m gaa redio nke m nwere ike ịkọwa ihe m chọpụtara. Ọ kọọrọ m na nke a ga-abụ a 1 1 na ajụjụ ọnụ, ma n'oge ndụ na agbasa ozi n'ikuku na mberede mara ọkwa na Micha Kaiser bụ na show. Nke ahụ bụ a ọkaibe usoro, ma na-agbasa ozi n'ikuku mere Kaiser obere mma, n'ihi na m dị nnọọ jisiri napụrụ na ọ na-akwụ ụgwọ site n'aka ezinụlọ na n'ezie na-arụ ọrụ na Jack Abramoff. Mgbasa ozi ndi ozo emeela ka o leghaara m anya dika ihe. Ha we were ya niile maka m na nke a opprobrious na nkwutọ ọgụ na ndị niile (iche site Niburu.co na Micha Kaiser si Whistleblower Online saịtị) ma ọ bụ enịm na o siri ike njikọ m isiokwu, ma ugbu a, ha nwere ka m na-ekwusi ike wakpoo na ọbụna mwakpo n'ihi na m na-ekpughe site na Micha Kat.
Tupu ihe a niile emee, Marcel Messing akpọburu m oku ịbịa ụdị nzukọ ka m sonye n'usoro mgbasa ozi na ndịda mba ahụ. N’oge ahụ, enwetara m nkwado n’ihi na enyere m onyinye iji gboo ụgwọ mmanụ m.
O doro anya na uru enweghị ọrụ m na-aga ịkwụsị. N'oge ahụ apụrụ m ịhapụ ihe ndị m na-ezute ma n'oge ahụ a chụpụrụ m n'ụlọ m ka m biri ndụ mgbochi. N'ihi ya, m na-anyagbọ 4,5 awa na 4,5 elekere n'ụgbọ ala na-egbu mmanụ. N'oge nzukọ nke weebụsaịtị mgbasa ozi ọzọ, ebe ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwere aha na ama aha n'ime usoro mgbasa ozi ọzọ nọ (Marcel Messing, Ad Broere, Guido Jonkers, wdg), a tụlere banyere njikọ aka. A ga-enwerịrị ụzọ nchịkọta maka usoro mgbasa ozi ọzọ. Marcel Messing gosipụtara na ọ maara ndị chọrọ inye ọtụtụ nde mmadụ ohere. Echere m na nke ahụ bụ ihe dị ịtụnanya ma ọ welitere ajụjụ banyere ndị “ndị mmadụ” ahụ ga-abụ. Ọ dịghị mgbe m chọpụtara, n'ihi na ọnụnọ m bụ otu oge. Aghọtara m ihe egwu n'ụzọ doro anya mgbe m kpughere Micha Kat.
Ebe ọ bụ na 2014 m hụrụ na mberede na aha ọhụrụ pụtara na ọnọdụ ahụ. Otu nwaanyị aha ya Irma Schiffer pụtara na mberede dee isiokwu na isiokwu na m broached na o yiri ka ọ bụrụ na e nwere na-oru ọzọ Martijn Vrijland n'ụdị a Irma Schiffer. Nwaanyị a na-akwalite nkwalite site na saịtị niile amaara na mgbasa ozi ọzọ. Anyị na-hụrụ chịchaa otu agadi nta akụkọ aha ya bụ Judy Monshouwer onye mere ihe yiri ihe e mere n'ihu German nta akụkọ Onweli Egwu Na Amu Ulfkotte. Ulfkotte 17 afọ na-arụ ọrụ maka Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'ma ọ bụ' FAZ 'wee pụta na a akwụkwọ na nke ọ kpọsara na CIA mgbe ụfọdụ ịnara aka azụ oru nta akuko. Netherlands enweghị ike ịnọ n'azụ, ya mere anyị nwetara 'Udo Ulfkotte' nke anyị n'ụdị Janneke Monshouwer dị ụtọ ma bụrụ onye a tụkwasịrị obi. O kwusara ozi ọma ma ọ bụ ihe na-erughị banyere otu ndi oru Dutch. Ụlọ egwuregwu WantToKnow, Earth Matters, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ jiri ịnụ ọkụ n'obi kwalite aha ọhụrụ ahụ. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Dutchman edemede na-achọ ịnụ.
Anyị na-ahụkwa na mberede ụdị aha ndị ọzọ ọ bụla, dị ka Martijn van Staveren, Willem Felderhof na Coen Vermeeren. Ndị niile na-etinye aka na mpaghara "nke ịgba izu megide" ma ọ bụ ọnọdụ ime mmụọ. Ha na-esi na ala bilie na mberede dị ka nsị na ọ dị ka, ebe ọ bụ na oge 2013 m na-arụsi ọrụ ike, e kwesịrị iwe ezé iji nweta obi ike nke ìgwè ndị mmadụ na Netherlands. Ọ bụghị nzube m iji kwurịta ma mejupụta 1 niile aha maka 1, n'ihi na ị nwere ike chọpụta n'onwe gị onye bụ ma ọ bụ na-enweghị ntụkwasị obi. Nanị m na-akọwa nkọwa m. Martijn van Staveren Enweela m otu mkparịta ụka otu ugboro; Willem Felderhof bụ mberede na-esote usoro nnọkọ ogbako a na-akpọ 'Open Mind' na Coen Vermeeren kpaliri onwe ya dika Ufo na ọkachamara 911.
Ihe aha ndị a niile na-emekarị bụ oge ha na-emepụta ngwa ngwa na ego ha na-enweghị atụ, ohere na 'ezigbo profaịlụ' na nkwado ha site na ihe niile na onye ọ bụla n'ime mba mgbasa ozi ọzọ. Nke ahụ nwere ike na i nwere ike na-atụle ya dị ka mma, mgbe ị ga-achọ na-abọ ọbọ, ekworo, iwe ma ọ bụ onwe-kere iche 'Martin Vrijland pụrụ ịtụle. Ọ dịghị nke ọ bụla. M ga-kama nwere ndị na-abụghị echiche wee na-arụ ọrụ nke ọma na-achọ eziokwu, iji lekwasị anya na-ede banyere onwe m echiche na ozi ọma na ugbu a na-eme, kama n'ihi na achọpụtara m na-achị n'ụzọ nkịtị jichiri ma na-emekarị jikọrọ desinfo ma ọ bụ egwu ụgha, ana m eche na a kpọrọ m ịdọ aka ná ntị doro anya. Ke adianade do, m ga na-echetara gị ebe a nke eziokwu ahụ niile weebụsaịtị na ọzọ media ama esịn m mgbe ahụ (na site na-arụ ọrụ si oge) m Crook Micha Kaiser unmasked. Nke ahụ kwesịrị ime mgbịrịgba.
Ihe ndi mmadu ndi ozo na-achota bu na ha adighi ka okwute na ha bu 'echiche ndi ndu'. Nke ahụ ọ dị mkpa? Ọ dịkarịa ala dị ịrịba ama ịkọ na nke a mere na m ikpe. Nke ahụ ejedebeghị na nkwutọ na nkwutọ banyere ihe mgbochi, mkpọrọ, mwakpo na ihe ndị ọzọ, ma ọbụna gara nke ukwuu na ụdị nkọwa niile banyere nwa m gụnyere afọ, ebe obibi na ụlọ akwụkwọ. Ma nke ahụ nọgidere na-ahụghị ya, ọ bụghị ndị niile mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ ahọpụtara. Ee, ma eleghị anya ị nwere ike iji ụgwọ ahụ n'onwe gị, echiche ahụ nwere ike ịbụ, mana eziokwu bụ na e mepụtara ihe na nkwupụtaghị ihe ọ bụla; eziokwu ahụ bụ na nke a gosipụtara na ọ si n'aka onye ọrụ obodo; eziokwu ahụ bụ na ndị na-abịa ọhụrụ anaghị enweta ọgụ ndị dị otú ahụ; Tụkwasị n'eziokwu na ha na-akwalite ma na-akwado ibe ha, kwesịrị ịjụ ụfọdụ ajụjụ. O nwere ike ịbụ na AIVD niile zụrụ ha ma kwalite ha? Ka ọ bụ na echiche mgbagwoju anya?
Chere nkeji. Ya mere, anyị nwere ike ikwere na gọọmentị na-eji arụ ọrụ ọrụ ụgha ma na-agbasa akụkọ ma na-eji mgbasa ozi dị egwu, ma anyị enweghị ike ikweta na ọrụ nzuzo nwere mgbasa ozi ọzọ na akpa ya? Gịnị mere ị ga-eji chọọ otu dị nnọọ ize ndụ nọrọ jụụ? Vladimir Lenin ekwuolarịrị na ụzọ kasị mma isi chịkwaa iguzogide bụ idu ndú na mmegide ahụ. Ma ọ bụ na ọ bụ naanị ihe a na-etinye na ochie, Soviet Union na-adịghị mma? Ọ ga - abụ na ogwe aka nke AIVD na Netherlands nwere ike ịbụ ọgaranya karịa ọtụtụ ndị na - eche? O nwere ike ịbụ na Chineke nke mgbasa ozi ndị ọzọ nke Dutch, Marcel Messing, bụ onye bịara n'ogo dị elu na-adịghị ahụ anya na freemasonry, bụ onye guzobere ụkpụrụ a na Netherlands? Iji mebie mmegide siri ike, ị ghaghị inye ndị mmadụ ihe ha na-achọ: 'eziokwu'.
Gịnị bụ eziokwu?
Na nbudata gị maka eziokwu, isi ihe bụ na ọ dịkarịa ala inwe mmetụta na 'nke a na-ada ụda dị mma'. Mgbe ahụ ị ga-abịaru nso oge eureka ebe onye ọ bụla na-achọ obi nkoropụ banyere mgbasa ozi kachasị na mgbasa ozi doro anya na (ọtụtụ) ụgha. O yiri ka etinyewo mkpa a n'ime ihe dị elu karịa banyere 2014. Dịka ọmụmaatụ, Irma Schiffers ji ọrụ n'aka ya. Enwere ihe maka onye ọ bụla na mgbasa ozi ọzọ. Ì kwere na ụwa dị larịị? Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta nke ahụ. Kwere na ndị ala ọzọ ma ọ bụ UFO, ị nwere ike ịga ọtụtụ channelụ na ịnwere ike ịchọta onye "dị ike" nke dịka Martijn van Staveren. Ị kwenyere na ụmụaka na-achụ àjà? Mgbe ahụ, ị ​​pụkwara ịchọpụta na n'oge na-adịbeghị anya na "onye na-akụbu ego na onye na-agba mbọ" Ronald Bernard. O doro anya na e nwere isiokwu ndị mmadụ niile na-atụgharị ntị ha ugbu a: 911, ọgwụ ịgba ọgwụ na ọgwụ chemtrails. A ga-ejere gị ozi na WantToKnow, Earth Matters, Ninefornews na na. Anyị nwere ike fọrọ nke nta na-akpọ "ọzọ media, chọọchị na ụka doro anya na mkpa untainted ozi. Ndi pastọ nwere ezi omuma, omuma ihe omuma na akuko di egwu. Ndị bụ ndị na-amaja na-akpọ na ụwa abụghị ewepụghị na na a "ụgha ọkọlọtọ ọrụ" mgbe ụfọdụ ikekwe a hoax ma ọ bụ onye na-akpọ unu na-egwuri zoal TV nkwusa ka American ọha mgbe egwuri, ị na-achọghị na ụka.
Ọ bụ banyere ọchịchọ gị ịchọ eziokwu ahụ. Nke a bu ihe doro anya nke mere ka otutu ndi mmadu meghee anya maka mgbagwoju anya na ugha nke ulo oru mgbasa ozi. Mana ịchọta eziokwu, ị ghaghị ịmụta iji ụbụrụ nke gị. Ị ghaghị ịmụta na ị ga-achọta ya na chọọchị siri ike na nke a pụrụ ịdabere na ya: ụlọ ụka mgbasa ozi ọzọ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-amụghachi ịtụkwasị onye ozi ahụ obi, dị ka pastọ kwusara ndị na-aga chọọchị eziokwu nke ikpo okwu ahụ. N'ụzọ dị otú a ị ga-enwe ike ịdabere na ndị ozi ọhụrụ nke mgbasa ozi ọzọ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị mara na ị na - eme ihe banyere ndị pastọ a pụrụ ịdabere na ya bụ ndị na - echefu eziokwu gị nwere ntụkwasị obi n'ihi na ha nyochaa nke ahụ. Mgbe ahụ ị ghaghị ime ihe ọ bụla n'onwe gị. I nweghi oge maka nke a ma pastọ ahụ amụọla maka ya. Ọfọn, nke ahụ bụ maka ozi nke Media Coordinator Vrije; ihe o doro anya na ọ bụ Ad Broere na Irma Schiffers na-emepụta ya, ma nke sitere na aka nke mgbasa ozi ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'azụ Mpaghara. Ọ bụ ụzọ a tụlererịrị mgbe mụ na Marcel Messing na-aga nzukọ.
Kedu ihe eji eme ihe na afọ ndị a? Mgbe ya tụgharịa na ịlụ Bibie nke na-achọghị na-eme nnyocha Martin Vrijland site ikwuto na nkwutọ online, na-eme na-enye "elu", nke ọtụtụ puku na-agụ akwụkwọ ọ bụla ụbọchị otú mberede chere ọhụrụ ghọtakwuo si ndị achọghị dere. A ghaghị imechi ọnụ mmiri ahụ ma mechie ọnụ ahụ, a na-eji osisi tọọ egwu egwu egwu. Ọtụtụ osisi na ike niile na-eto eto a obere na niile na ọ na-ekwu ihe na-akpali banyere n'elu mara achị, ma ka dị nnọọ obere dị iche iche. A debere osisi nke ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi ndị ọzọ. Na ọhịa niile na oge na-ama na-achịkwa ndị AIVD na n'azụ Mpaghara na-arụ ọrụ ndị na saịtị na-ama nke ọma achikota ọnụ site coordinators ka Marcel Brass na Guido Jonkers, ma ọ nwere anya na visual ubi ka esiwanye ike en ozi ndị ọzọ. Ị hụghị ọhịa site na osisi ọzọ! Nke ahụ bụ kpọmkwem ebumnuche. Na na! Na mberede, e nwere nna na ụdị nne na-atụkwasị anya (bụ ndị sila n'otu ebe ahụ). Ad Broere na-azụ ahịa na-atụ anya nke ọma na Irma Schiffers a pụrụ ịdabere na ya. Nke a ọ bụghị nke ahụ na-enye gị ezigbo 'obi ụtọ' ọdịnaya? Na n'ezie anyị nwere mgbe niile obi ụtọ ma na-enwe obi ụtọ Arjan Bos nke Ụwa Matters ndị n'ezie chọrọ inyere aka na-akwado ndị niile obere ụka n'ime 1 nnukwu ụka. Ị nwere ike ịmara onye na-ahọpụta ndị ozi. Biko ị nwere ike ịghọ onye ụka a? Chọọchị chọrọ ego iji mepụta atụmatụ ọma ya niile. Na e nwere ego n'azụ ọnọdụ (dịka Marcel Messing kwuru n'ezoghị ọnụ n'ihu m n'oge nzukọ) ịkwesighi ịma. Chọọchị Katọlik nwekwara ego, ma site n'ịghọ onye òtù ị kwadoro okwukwe gị, ị na-etinye onwe gị na chọọchị ahụ. Ugbu a, ị ga-eme nke a na ụka ọhụrụ nke De Vrije Media. Ha ga-achọ eziokwu maka gị. A sị ka e kwuwe, ha "achọpụtala ugbu a". Ah, ma ọ bụrụ na ị bụbu onye ụka ahụ a tụkwasịrị obi, ị gaghị enwe ike ịkwado Martin Vrijland dị otú a, bụ onye na-enweghị ike ịnweta uru enyemaka ọha na eze. A sị ka e kwuwe, ị na-atụnye ụtụ n'eme ụlọ nke na-enye onwe ya dịka onye a pụrụ ịtụkwasị obi. Nabata ụka ọhụrụ. E mezuru ozi. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
A na-ejere gị ozi
Site ugbu a gaa n'ihu, a ga-eji eziokwu ahụ "De True Vista" mee ihe. Nke a bụ otú AIVD mbụ si kee oké ọhịa na nke ahụ bụ otú ọ na-esi amalite ugbu a. 'Ụzọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide bụ ịdu onwe gị'. Mana olee otu i si mara na AIVD n'azụ ya? Kedu ka ị si mara na a enyochala ya? Were mkpughe nke onye ọpụbu Ronald Bernard! Ònye na-ekwu eziokwu? Ee, n'ezie! Dị ka m kwuru, ị na-achọ eziokwu ahụ, a na-ejikwa eziokwu ahụ na-ejere gị ozi. Ọ bụ eziokwu na eziokwu bụ eziokwu. Ị maara ma ị hụ eziokwu mgbe ị nọ n'ụgbọ mmiri na-aga n'ụsọ oké osimiri? Na ị nwere mmiri gbara gị gburugburu, hụ n'ụsọ oké osimiri n'akụkụ dị anya ma gbaa ndị njem ibe gị gburugburu; nke ahụ bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha. Ihe ị na-apụghị ịhụ bụ ihe na-eme n'ọdọ mmiri. Ụgbọ mmiri a na-achịkwa na-asọpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri.
N'okpuru ebe a, ị gaghị ele anya na ị ga-ahụ ihe ndị na-acha ọbara ọbara. Mgbe ụfọdụ ị na-ahụ ọnụ. Ma, ị nwere ike ịhụ nrịbama niile n'otu oge?
Na ọzọ image (hụ n'okpuru) i nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya na nwa ọcha na ihe oyiyi, ma ọ bụrụ na ị na-ele a obere ogologo karịa 10 sekọnd (elekwasị anya gị na 4 ntụpọ), mgbe ahụ itabi anya gị na ihe niile na-ọdịdị na-egbu maramara elu, ị ga-ahụ "ezigbo mara amara". Ị ga-ahụ ihe osise zoro ezo. N'ụzọ dị otú a, a pụkwara ịkpọ egwu gị. Ọ bụrụ na i chere na ị na-ahụ ihe ziri ezi, ị ka na-eleghara isi ihe ole na ole ma ọ bụ ihe oyiyi ahụ na-ezochi ihe oyiyi dị omimi. Kedu ihe ma ọ bụrụ na mgbasa ozi kachasị na-enye gị 'nwa' na foto dị n'okpuru ebe a na mgbasa ozi ọzọ ị "acha ọcha"? Kedu ihe na-atụgharị? Ị ka nwere ike ịhụ foto ahụ zoro ezo. Na nke ahụ, n'echiche m, ọ bụ kpọmkwem ebumnuche.
Okwu a bụ 'onye ọrụ ọkụ' bụ okwu a hụrụ n'anya na mgbasa ozi ọzọ. 'Ìhè ahụ' na-enwu n'ọchịchịrị. Ma ọ bụ dika Ronald Bernard ihe nkiri a akọwa ihe mara mma mgbe ọ na-ekwu na otu ìgwè mmadụ nọ ọdụ n'ọchịchịrị ruo nwa oge ma ghaghị iji ọchịchịrị mee ihe. Mgbe ahụ, ìhè niile na-enwu ọkụ, ìhè ahụ na-ejidekwa onye ọ bụla. Ihe na-adọrọ mmasị, ma ìhè ahụ nwere ike ịkọwa ìhè ọkụ Lucifer. Aga m alaghachi na nke ahụ. Ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị bụ: Ọ bụrụ na mgbasa ozi ọzọ na-anọchite anya 'ọcha' (ìhè) na foto ojii nke mgbasa ozi dị egwu, ị na-ahụ eziokwu ma ọ bụ onyinyo nke eziokwu ahụ?
Ịchọrọ ihe àmà siri ike na AIVD guzobere mgbasa ozi ọzọ. Ha bu ezi okwu na m na eme, ya mere enwere m ike ghota gi. Ọ dị ka foto ahụ dị n'elu; ọ na-egosi gị nwa na-acha ọcha, ma iji nwee ike ịhụ onyinyo ahụ, ị ​​ga-eleba anya na oghere 4 ruo nwa oge, ma legharịa anya na anya gị na-adaba ma ṅaa ntị n'ihe ị na-ahụ. Nanị m nwere ike igosi gị akara nke onyinyo a na-ahụ anya. Na mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịgwa ndị na-ekwu na ndị mmadụ na-eme ihe nakwa na akụkọ ndị ahụ yiri 'na-acha ọcha' na onyinyo ojii ahụ, kama na ha na-ekpuchi onyinyo ahụ. Iji hụ onyinyo ahụ zoro ezo na onyinyo a na-ahụ anya, kpaa anya gị ozugbo.
Akụkọ banyere Ronald Bernard bụ na ihe atụ zuru oke. Ronald gwara gị ihe niile yiri ka ọ dị mma. Ọ na - agwa gị otu ụlọ ọrụ akụ na ụba na - arụ ọrụ na ọbụna na - akọwa na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ụmụ okoro nwoke nke ụlọ akụ; ụlọ akụ na elu nke pyramid. N'elu pyramid bụ bank BIS; n'okpuru obere ụlọ etiti na n'okpuru obere bank. Ọ na-akọwa foto pyramid a maara nke ọma na onye ọ bụla nke nọworo na-arụsi ọrụ ike ruo oge ụfọdụ maarala mgbasa ozi ọzọ. Ronald yiri ka ọ na-etinye mkpịsị aka ya n'akụkụ ọnyá nile! Irma Schiffer gbara ajụjụ ọnụ ya na na na njedebe nke Part 2 nke Ajụjụ ọnụ usoro (nke coincidentally ewe mma n'anya Masonic nọmba nke 33 nkeji) Ronald nwere Masonic tie ọzọ dọtara na onye ọ bụla na-ekwu okwu amaja isere akụkọ ya n'ime obi abụọ mgbe n'azụ na-ewe iwe . Eleghi anya a ga-eduzi ya na mgbasa ozi ọzọ a na-achịkwa na Micha Kat, bụ ndị na-achọ Bernard CV. Enweghị m akwụkwọ banyere Ronald n'oge mmepụta ihe nkiri a.
Anọ m na-egwu egwu site na NLP na media media n'ihu, ma Ronald Bernard na-ejikwa ya oge niile. Karịsịa mmegharị aka na minit ikpeazụ nke vidiyo dị n'okpuru ebe a na-enye nkọwa doro anya. Ịgbasaa aka na-enye ozi ozi ahụ bụ "Abụ m nnukwu" (ma ị bụ obere); ụda dị jụụ nke njide onwe onye nke na-ekpo ọkụ site na iwe na mmetụta na n'ikpeazụ ka akwaa akwa; mkpịsị aka aka na-ekwu okwu na olu iwe na asụsụ anụ ahụ 'jidesie ike gị'. Ronald na-enye ozi na-amaghị ama nke "Enwere m ike" na ejiji, mmegharị aka na okwu ọnụ. N'ajụjụ ọnụ a dum, "eziokwu a na-enweghị mgbagha" na-ejikọta ya na Irma nwere ọrụ ịsị 'ee' na 'ziri ezi', iji mee ka uche gị dịrị n'usoro. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Na m mbụ isiokwu Banyere Ronald Bernard m kọwara otú o si dị mfe ịgụ na ọ bụ onye omee. Irma Schiffers na-egosikwa na ọ na-eji Derren Brown 'usoro ọrụ ebube' (lee ihe nkiri a) a zụrụ ya. N'ezie akụkọ ya zuru oke. Ọ bụ onye na-ese ihe, nwere HSP na .. ọma ị nwere ike ịgụ ihe ọ na-ekwu onwe ya [see okwu]
A mụrụ (ihe ka njọ) na 3 February 1962 ebe Hilversum; Jungian na-agwọ ọrịa; onye na-achọ eziokwu; nchịkwa; njirịta ọkụ; raara onwe ya nye ndi mmadu, anumanu na okike; enwe mmetụta dị nro na nhụsianya na aghụghọ na nrụrụ aka; (ex-) bassist; ee, HSP; ọkachamara na-elekọta mmadụ; mmetụta ọchị, nke ime mmụọ na nke ụwa (niile-na-otu!) na onye na-egwu mmiri na optima; Ana m aga maka ya nnwere onwe, nnwere onwe, nha anya, ikpe ziri ezi, nghọta na ịkwụwa aka ọtọ. Ndị ọzọ na-atụgharịkarị ya dị ka ndị na-adịghị mma, ndị na-enweghị atụ na ndị dị egwu ".
N'ebe ahụ, anyị nwere okwu ahụ bụ 'lightworker' ọzọ, nke ị ga-emerịrị ugboro ugboro na mgbasa ozi ọzọ. Ị na-echeta onye ìhè a si; onye na-acha ọcha na foto nwa? N'ezie, Irma nwere oke nlezianya ya na HSP. Nke ahụ bụ ihe dị mma, n'ihi na n'ihi nke a (ọ bụghị site na nkwado ya site na AIVD) ọ na-amaghị na ọ ga-esi kwuo banyere ndị nkwekọrịta niile kemgbe 2014. Ma nke ahụ abụghị nanị ihe ahụ! Irma bụkwa onye na-ajụ. Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai Ọ eche naanị ma ọ bụ ihe dị mma ma ọ na-akọwa ọcha na ákwà oji.
Ugbu a, ị nwere ike iche na naanị m na-akpọ ma ọ bụghị abịa na ihe akaebe. Ị hụrụ ihe ị ga-ahụ na foto ojii na oji? Ana m akọwapụta ihe ndị ahụ. Ị ghaghị ịgbalị ịhụ ya ma ọ bụghị mmadụ niile na-ahụ ya. Ihe àmà mgbe ụfọdụ na-egosi na ihe ngosi na ozi zoro ezo.
Ihe ịrịba ama ezoro ezo
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ozi ndị a ezoro ezo adịghị anya, ma a ga-egosi gị. Nanị nsogbu bụ na ị nweghị ike ịhụ ya. O nwere ike ịbụ na ị nọ na chọọchị ugbu a ma na ị na-akwụ ụgwọ ugbu a na Coöperatie Vrije Media ma ọ bụ kwụọla ụgwọ 100 gị na Obi ụtọ B (onye na-enweghị ike ịkpọ onwe ya akụ). Ị gaghị aga ọgụ ụka nke na-eme ka ìhè dị n'ọchịchịrị doo anya? Ọfọn, mgbe ahụ i nwere ike imechi anya gị ka ihe atụ.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-agụ akwụkwọ kwuru ihe ndị na-esonụ banyere Joy B (Ron) Bernald [see okwu]
Enwere m anya na nke a ogologo oge akwukwo ulo akwukwo obi uto. Ihe mbụ ị na-ahụ bụ n'ezie akara mmanụma nke na-anọchite anya akara ngosi phallic na freemasons ya. N'izo nso ya bụ okwu "akụ gị."
Onye na-ekwu okwu ọzọ kwuru ihe na-esonụ:
E gosipụtara akụkọ Db banyere De Blije Bank. Ị nwere ike icheta foto ndị ahụ nke ụlọ Rothschilds gụnyere foto? Edere kaadị ịkpọ òkù ahụ lee ebe a.
Enyo bụ n'ezie ihe nnọchianya dị mkpa maka usoro Aleister Crowley (Luciferian) nke 'gbanwee akara' na 'usoro ndị ọzọ'. Enyo na egosi, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, na ị bụ Luciferian. The 'd' na logo nke Obi ụtọ B na-enye 'b' na onyinyo oyiyi. Ọzọkwa, akwụkwọ ozi abụọ a nke na-esote ibe ya na-enye ihe oyiyi phallic (nke okwu ahụ bụ 'nhazi' na okwu 'ụlọ akụ ahụ na-emepụta' na-ezo aka na mmepe phallus). Ya mere, nke a bụ ihe atụ Lucifer. Ma nke ọma, ka anyị ghara ime ya siri ike ma lee anya na logo nke ntọala United United. Ikwesighi ile anya nke oma iji mata pyramid? Ndị Lucifer na-akwado na ndị na-akwado 'Anyị niile bụ', 'Otu World Government' na 'Otu Okpukpe Ụwa' na-egosi Luciferianism mgbe niile n'ihi na ha kwenyere na nke a bụ iwu nke nnwere onwe ime nhọrọ. Ha na-achọ igosi gị eziokwu ahụ, nke mere na foto dum dị na agba. Ha na-etolite na-acha ọcha n'isi, ma naanị ị na-ahụ ọdịdị nke ihe oyiyi zoro ezo.
United Nations chọrọ ka ha dị n'otu. Nke a ọ bụghị ezigbo Luciferian? Ị nwere ike tụlee pyramid na logo ahụ dị ka onye aka ya dị ọcha. Ị ghọtara njikwa aka 666 site n'aka Arjan Bos site na Earth Matters na otu n'ime vidio YouTube? Ndị nkwusa nke ụlọ ọrụ mgbasaozi ndị ọzọ nwere ike igosi gị ebe ha mara ụlọikwuu, ma zoro ezo. Ị ghọtara enyo na vidiyo n'okpuru Irma Schiffers? (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Onye nabatara ihe m gara aga na-aga n'ihu na nkwupụta (akọwabeghị) nkwupụta [see okwu]
De Blije B. dabeere na Switzerland, olee otú ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọ bụghị ya? A ghaghị ịzụlite echiche ha ma chụpụ ha na ụlọ akụ ndị ọzọ, echere m otú ahụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ihe ịrịba ama na mgbidi? Ya mere, a na-ewere gị na ọ bụ ụlọ ọrụ mbụ; na-ezo aka na ọnyá niile nwere ike ịchọtala na mgbasa ozi ọzọ; chịkọta ha na nyocha nke Irma Schiffers; ịmalite ụlọ akụ n'onwe gị! Ronald na Irma na ndị ọzọ na-eme ihe nkiri na mgbasa ozi ọzọ gbalịrị ime ka ị kwenye site na akụkọ a na-eduzi nke ọma ma na-ekwenye ekwenye, bụ ebe a pụrụ ịchọpụta ihe niile nwere ike ịchọta onye ọ bụla na-achọ eziokwu n'ime afọ. Ọ bụ ihe ederede magburu onwe ya. Ma, ọ ka nwere isi ísì dị elu nke na-eme ha gburugburu. Irma Schiffers ajụghị ajụjụ 1 dị oke mkpa na akụkọ Ronald Bernard enweghị ike ịkọwa. Otú ọ dị, mgbasa ozi ndị ọzọ ejiriwo ma jiri ya mee ka mgbasa ozi ọzọ dị na mgbasa ozi nke Coöperatieve Vrije Media. Ha ga-egosiputa gị ụzọ site na (ọhịa okike AIVD) kere onwe ya gaa na saịtị mgbasa ozi ndị ọzọ (na-emeghị ka ị mara Martin Vrijland).
Mfu na ugbu a?
Ezi, ekele maka nhụsianya na ihe ugbu a? Ònye ka m nwere ike ịtụkwasị obi ugbu a na ihe m ka ga-agụ ma ọ bụ. "Anyị na-esi n'uko ụlọ mposi, na-enye ndụmọdụ ntụpọ ụlọ mposi"Ọ ga-adị mfe, mana m na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ isiokwu m, karịsịa ka ị ghara ịhapụ ya na" ụka ọhụrụ "na" onye ozi ọzọ ", kama iji rụọ ọrụ nke aka gị na mkpụrụ obi gị. iji jikọọ. Ee, ndị ọrụ 'ọkụ' na-agwa gị nke ahụ kwa, ma ha chọrọ ka ị nọrọ na nne na nna Lucifer. Enwere m olileanya na ị ga-agbapụ na nke ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na mgbasa ozi na mgbasa ozi ọzọ na-achacha onyinyo gị, ị ga-ahụ onyinyo ahụ na-ese onyinyo ahụ. Ha na-eme ka ị hụ foto zoro ezo.
Legha anya azụ na onyinyo ahụ dị n'elu site na agba ntụ. Ị na-ahụ ọ bụla ugbu a na mgbe a ntụpọ na ọ na-anya dị ka oghere na jikọọ na ndị ọzọ media, ma ị dịghị ahụ ha niile ozugbo. Ha na-eme ka ị ghara ịchọta mkpesa na-enweghị mgbagwoju anya nke nne na nna Lucifer. Ọ bụ ezie na ha ga-agwa gị na a na-achụrụ ụmụaka àjà n'isiokwu dị n'elu. Ndi emetụhọ ke Ronald Bernard ama ọfọn? Ka ị ga - achọ ịbụ onye so na Chọọchị Obi Ụtọ? Echefukwala Free Media! Ha chọrọ nkwado gị n'ezie!
Ihe niile saịtị ndị a na-eme bụ rịọ maka onyinye mgbe ị na-enweta ego. Nke a bụ ụzọ aghụghọ, iji jide ifufe site na ụgbọ mmiri ahụ, bụ nke na-ebibi kpamkpam ma ọ nweghị ebe na-acha uhie uhie. Ònye ga - ewere oku Martin Vrijland maka enyemaka nke ọma ma ọ bụrụ na weebụsaịtị niile (nke AIVD kwadoro) niile yiri ka ọ dị mma? Right.. na nke ahụ bụ kpọmkwem ebumnuche.
Nnwere onwe ikwu okwu nwere ike ịbụ eze, ma ị ga-ebibiri ọha mmadụ dịka ego. N'ụzọ dị otú a ị nwekwara ike ịkatọ nkatọ gị. Maka na m adabere kpam kpam n'enye onyinye n'ihi nkwanye okwu na nkwulu na ntanetị online, ana m arịọ gị ka ị kwadoo m. Nke a bụ ezigbo mkpesa (dịka oku si na saịtị ndị iro a na-achịkwa bụ ndị niile na-anụ ọkụ n'obi).
Iji mee ka o doo anya na anaghị m ere ụlọ, ị nwere ike ịlele ọnụ ọgụgụ nke onyinye ndị a n'Ịntanet njikọ a.
Ajụjụ niile! Chee echiche n'onwe gị. Ekwela ka a ghọgbuo gị site na "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eziokwu" na -eme foto ahụ, ka ị ghara ịhụ onyinyo ahụ dị adị ma zoro ezo.
Nleta ha: 2.534.054